खुल्ला प्रश्न : चर्को बोल्ने गगन थापा स्वास्थ मन्त्री हुदाँ के गर्दै थिए ? – USNEPALNEWS.COM
जब जनभावना मुद्दा को रुपमा उठछ तब जनता ले आफ्नो बोली बोल्ने हरुलाइ नेता मान्छन र बिद्रोहको जेहाद छेड्छन् । ,क्रान्तिको सुरुवात त्यहीबाट हुन्छ जनहितका सवालमा सयौ बिष हरु मध्य स्वास्थ जस्तो गम्भीर विषय दलालहरुको पन्जामा पर्छ ।।
गरिब जनता रोग लाग्दा ज्यान जोगाउन घर खेत बेचेर उपचार गर्न विबश हुन्छन । त्यही जनताको रगत पसिना र भावना माथिको व्यापार स्वास्थमा भैरहेको छ । यति धेरै जनहितको बिषय किन जिम्मेवार ब्यक्ति मौन छन भन्दा त्यहा केही कनेक्सन पक्कै छ ।
मेडिकल क्षेत्रको माग बोकेर डा गोबिन्द केसि १५ औ पटकको अनशनमा छन , उठान गरेका केही माग म जनता हु , मेरो पनि माग हुन ,जो जनताको हितमा छन तर केही मागको पछि राजनिती लुकेको छ । त्यसमा फरक मत छ ।
सुशासन र बिधिको मुद्दा उठान गरेर केसिको पुच्छर समाती सत्याग्रह मार्फत राजनितिक स्थान प्राप्तिको लागि बटुको थापेर बिबेकसिल साझा पार्टी त गठन भएको छ नै, अब त्यही भिडमा अर्को बटुको थापेर काग्रेस पुगेको छ । जसको नेतृत्व चर्चित युवा नेता गगन थापाले गरेका छन ।
बटुको थापेर त्यहा पुग्नु पुर्ब यो भुल्न हुदैन की कुनै बेला गगन थापा नेपाल सरकारको स्वास्थ मन्त्री थिए र केसिको अनसन त्यतिबेला पनि थियो जतिबेला गगनको नेतृत्वमा स्वास्थ मन्त्रालय थियो । आज समबेदनामा चर्को बोल्ने गगन त्यो बेला के गर्दै थिए ? त्यो सबै बिगतले हामिलाइ बुझाइ दिएको छ ।
पदमा हुदा त्यो परिस्थिति पचाएका थापा अहिले स्वास्थ क्षेत्रमा सुधार हुनु पर्ने भनेर कडा रुपमा प्रस्तुत छन । तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ बिमा १६ जिल्लामा लागू गर्ने पहिलो चरणको योजना लागू गरेपछि थापाको पालामा यो मुलुकभर पुग्यो राम्रो कामका लागि म धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
स्वास्थमा माफिया हिजो पनि थिए आज पनि छन गगन थापा आफ्नो कलम चल्दा किन ती सवालमा नया च्याप्टर लेख्न सकेनन ? कि माग राख्न मात्रै सजिलो हो पूरा गर्ने बिषय होइन हो । थापाको पालामा किन मौन बसियो ? किन तत्कालीन दलाल माफियाको विरुद्धमा बोल्न सकेनन स्वास्थ मन्त्री को नाताले गर्ने काम किन गर्न सकेनन जुन केसिको मागको रुपमा रहिरहेको थियो । सिनेमा हरुमा कथा देखिए जस्तै देख्दा कहानी नबनोस गोबिन्द केसि बिबेकसिल र गगनहरुको भुमिका जुन कुराको गर्भमा अन्य बिषय हुर्किरहेको होस ।
देशका सबै ठाउमा सुबिधा सम्पन्न अस्पताल दक्ष जनशक्तिको लागि आफ्नै मुलुकमा सुबिधा सम्पन्न मेडिकल कलेजहरु सक्ने र बिषय चाहानेले पढन सक्ने बाताबरण बनाउन सरकार सङग जोडदार माग गर्दछु । समस्यालाई समाधान नगर्ने तर सधै उठान गर्ने माहोल चर्काउने मात्रै हो भने गगन थापा लाइ प्रश्न माग उठान गर्ने बिषय हो पूरा गर्नु पर्दैन ?
अत्यमा जन आवस्यकताका दलालहरुको सधै दुस्मनको रुपमा रहेर लढने कुरा जानकारी गराउदछु । केबल यो समय ले उठान गरेको प्रश्न सोधेको मात्रै हु ।